UMEV01 uye UMEV02 ndiyo yekutarisa uye yekudzora unit yakashongedzerwa neLCD inobata color screen, ine Mushandisi-inoshamwaridzika yekudyidzana interface, yakagadzirirwa chaizvo iyo EV charger. Iyo inotaurirana neBMS, uye kudzora iyo yekuchaja module kuti ipedze iyo yekuchaja maitiro, uye Iyo ine akasiyana mabasa akadai sekubhadharisa, kuverenga kadhi, network, data kurekodha, kure kudzora, mhosva alarm uye kubvunza.
Iyo umev04 yekuchaja murwi kuongorora module yakashongedzwa neLCD inobata color skrini uye ine yakasarudzika yemunhu-komputa yekudyidzana interface. Iyo yakanyatsogadzirirwa iyo yeEuropean standard uye yeJapan mwero yekuchaja murwi wemotokari dzemagetsi. Inotsigira CCS + CHAdeMO + AC, CCS + GB / T + AC, CCS + CHAdeMO + GB / T, nezvimwe.
UR50060-W, B, EV kuchaja module yakanyatsogadzirirwa iyo EV DC super charger. Iyo inodada nezvakanaka zveyakakura simba chinhu kururamisa, kushanda kwakanyanya, kwakasimba kwesimba, kuvimbika kwakanyanya, kutonga kwakangwara, kutaridzika kwakanaka uye kudiki kwekugara. Yakakwirira kuvimbika dhizaini dhizaini uye nehungwaru dhijitari ekudzora matekiniki anoshanda pamwechete kufanofungidzira kudzivirira kukundikana uye kuona
UR50040-W EV yekuchaja inogadzirisa yakanyatsogadzirirwa iyo EV DC super charger. Iyo inodada nezvakanaka zveyakakura simba chinhu kururamisa, kushanda kwakanyanya, kwakasimba kwesimba, kuvimbika kwakanyanya, kutonga kwakangwara, kutaridzika kwakanaka uye kudiki kwekugara. Yakakwirira kuvimbika dhizaini dhizaini uye nehungwaru dhijitari ekudzora matekiniki anoshanda pamwechete kufanofungidzira kudzivirira kukundikana uye kuve nechokwadi chakanyanya kuvimbika.